DaabacaaddaCircuitBoardAssembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Golaha Guddiga Wareegga Daabacan - PCBFuture
Ereyga furaha: soo saaraha PCB, adeegga Golaha PCB, Shirka guddiga wareegga
PCBFuture waa soo saare PCB & PCBA oo xirfadle ah kana soo jeeda Shiinaha. Waxaan inta badan bixinaa saxsanaanta sare ee hal-dhinac ah, laba-dhinac PCB-lakab badan, LED aluminium PCB, PCB dabacsan, qaybaha wax soo iibsiga PCB soosaarka iyo adeegga Golaha PCB. PCBFuture waxay soo bandhigtay qalab casri ah waxayna xoojineysaa & nidaamka maareynta codka. Dhanka kale, Waxaan ka gudubnay shahaadooyinka nidaamka tayada caalamiga ah sida ISO 9001: 2008. Waxaan haynaa alaabada alaab-qeybiyeyaasha oo dhammeystiran iyo adduunka oo idil.
Maxaad u dooratay golahayaga guddiga wareega daabacan:
PCBFuture waxay leedahay nidaamyo wax soo iibsi oo qaangaar ah oo wax ku ool ah oo u adeega furaha furaha kulanka PCB qiimo jaban, wuxuu leeyahay koox xirfadlayaal ah oo mas'uul ka ah soo iibinta iyo maaraynta qaybaha PCB ee macaamiisheena.
Waxaan bixinaa Dusha sare (SMT), Thru-Hole (THT) iyo isku dhafka labadaba. Waxaan sidoo kale bixinaa meelayn hal-dhinac ama laba-dhinac ah.
Waxaan awood u leenahay in aan abaabulno alaabta ceyriinka ah ee soo socota, xakameynta nidaamka, iyo tijaabada ganaaxa, waxaanan ku siin karnaa adeegyada ugu fiican ee PCB-ka laga soo bilaabo dufanka yar ilaa wax soo saarka ballaaran. Inta lagu jiro hawsha rakibida PCB, haddii ay jiraan cilado la xiriira wax soo saarka PCB, injineeradeenu waxay soo sheegi doonaan warbixin DFM ah.
Waxaan kuugu soo diri doonaa qiimaha BOM emayl 24 saac gudahood.
Adeegga alxanka cadaadiska BGA, waxaan si badbaado leh uga saari karnaa BGA-ga khaldan, cadaadiska-alxanka, ka dibna si sax ah ugu soo celin karin PCB-ga. Waa mid qiimo jaban.
2-32L guddi-godka & HDI
Guddiga isdabajoogga sare
Guddi iska caabin ah oo gundhig ah
Alaabada tijaabada Semiconductor
Guddi koronto culus
2-6L guddiga salka birta
2-8L guddiga dabacsan & guddiga adag-hayalka san
Tijaabada alaabta la dhammeeyay
Adeegyada sanduuqa dhismaha
Dhiirrigelinta qaybaha iyo dhammaystirka shirkii PCB
Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyola xiriira dayactirka PCB iyo dib u shaqeynta iyo baaritaanka wareegga elektarooniga ah. Qalabkayaga iyo nidaamkayaga isku-imaatinku waxay waafaqsan yihiin heerarka IPC, MIL-Spec, RoHS 5 iyo 6.
In ka badan 10 sano oo ah hogaamiye warshadeed, PCBFuture waa mid ka mid ah kuwa ugu khibradda badan soo saarayaasha PCB-ga Shiinaha. Waxaan ku faraxsanahay inaan soo saarno alaab tayo sare leh, waxaanna siineynaa goob ammaan ah oo barwaaqo ah shaqaalaheena 200.
Sida lammaane hogaaminta wax soo saarka pcb iyo shirkiiAdeegyada (PCBA), PCBFuture waxay ku dadaaleysaa in ka badan 10 sano oo khibrad injineernimo ah oo ku saabsan adeegyada wax soo saarka elektarooniga ah (EMS) si ay u siiso taageero macaamiil badan. Waxaan go'aansanay inaan hogaamiye ka noqono adeegyada gaarka ah ee isku xirka wareega elektarooniga ah.